Fampiharana sy toetra mampiavaka ny sivana duplex
Ny sivana duplex dia antsoina koa hoe sivana duplex switching. Izy io dia vita amin'ny sivana vy tsy misy fangarony roa. Manana tombony be dia be izy io, toy ny firafitry ny tantara sy ny antonony, ny fahombiazan'ny famehezana tsara, ny fahaizany mivezivezy matanjaka, ny fandidiana tsotra, sns.
Raha resaka maintso, ny ankamaroan'ny olona dia mieritreritra lohahevitra mazava toy ny fiarovana ny natiora sy ny tontolo iainana. Green dia manana ny dikan'ny fiainana amin'ny kolotsaina sinoa, ary koa maneho ny fifandanjan'ny tontolo iainana ekolojika. Na izany aza, miaraka amin'ny fampandrosoana tsy tapaka ny indostria, ny maitso dia mihena amin'ny avo sp ...
Ny fitaovana lamba dia ampiasaina amin'ny filtration ambonin'ny tany ary ny fitaovana tsapa dia ampiasaina amin'ny filtration lalina. Ireto misy ny tsy fitoviana: 1. Ny fitaovana lamba (monofilament nylon, monofilament vy) dia manentsina mivantana ireo loto ao anaty filtration ambonin'ilay fitaovana. Ny tombony ...
Ahoana ny fomba hisafidianana sivana mety aminao?
Ny fahamendrehana tanteraka dia manondro ny filtration sombintsombiny 100% misy marim-pototra voamarika. Ho an'ny karazana sivana rehetra, dia fenitra tsy azo tanterahina sy tsy azo ampiharina io, satria tsy azo tanterahina ny 100%. Fitaovana fanivanana Ny rano dia mikoriana avy ao anaty kitapo sivana mankany ivelan'ny kitapo, a ...